Kukhona izithandani ezingajabuliswa yizitayela zocansi-ungoti
KUBALULEKILE ukuqale uxhumane nesithandwa sakho ngaphambi kokuthi wenze izitayela zocansi engazijwayele
BONGIWE ZUMA | May 30, 2020
IZITAYELA ezahlukene ocansini ziyalunonga futhi kukhona abangaluthokozeli ucansi uma bengezozenza. Kodwa ungoti kwezocansi uthi abajwayele lezi zitayela akumele bafune ukuzixina kophathina babo bengazange baqinisekise ukuthi nabo bayazithanda.
Bathi njengazo zonke izinto othandweni, uma ufuna ukwenza isitayela esithize, kumele uqale uxhumane nesithandwa sakho. Njengoba kwaziwa ukuthi emcimbini wocansi ngeke uze ulumise bese uthi esithandweni sakho 'asikhulume ukuthi uyasithanda yini lesi sitayela', kubalulekile ukuba nobuciko bokukwazi ukuxhumana nothandiweyo wakho kulowo mzuzu wokuxhamazela wocansi.
UDkt Vuyolwethu Olona Madikane uthi ungasebenzisa ukuxhumana okwenzeka ngamehlo, ngokuthi wenza sakusiqala isitayela bese ubheka isithandwa sakho emehlweni ukuze ubone ukuthi siyavuma yini. Uma singavumi, nawe uzozibonela, okusho ukuthi senobuye niyikhulume kahle kungasatatazelwa.
Uthi izitayela zocansi ziningi futhi akuyona into ongayenza ngomzuliswano owodwa noma ngosuku uziqede. Ngaphandle kwalokho uveze nokuthi kunabantu abangayingeni nhlobo ke nje eyokushintsha shintsha izitayela zocansi, kunalokho bavele bangaluthokozeli ucansi.
UDkt Madikane uthe izitayela zocansi zisebenzela uhlobo oluthile lwezithandani ezikhonze ukwenza izinto ezintsha njalo ekamelweni bese kuba khona abasetshenzelwa ukulenza ngendlela yakudala.
"Into ebalulekile ngocansi ukuthi nabababili kumele niluthakasele, ngisho nokukhuluma ngalo uqobo. Ungamcabangeli uphathina wakho ukuthi uzokujabulela ukushintsha izitayela ube ungakaze uhlale naye phansi umbuze. Kunabantu abajabule othandweni futhi abanelisekayo ocansini ngoba bazana kangcono, umuntu wenza into emjabulisayo nomunye," kusho uDkt Madikane.
Ephetha uthe nazo izitayela kulaba abangenankinga nazo kuba nendlela abafisa zenziwe ngayo kanjalo nohlobo lwezindawo. Kukhona uhlobo lwabantu olukhetha izindawo uma luzokwenza ucansi nokuyinto ehambisana nemizwa yabo nendlela abazizwa ngayo ngaleso sikhathi.
Kanjalo nohlobo lwabantu olungenankinga nokulwenza noma kuphi ucansi futhi abangakhethi ngisho nesikhathi sokulwenza. Lezi ezinye zezinto athi zibalulekile ebudlelwaneni ukuzibeka zicace.